နာဇီဂျာမဏီ crossword - အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ
နာဇီဂျာမဏီ crossword - အစောပိုင်းနာဇီအုပ်ချုပ်မှုကို
နာဇီဂျာမဏီ crossword - ဘဝနှင့်အလုပ်
နာဇီဂျာမဏီ crossword - နာဇီဝါဒထွန်း၏ဇစ်မြစ်
နာဇီဂျာမဏီ crossword - လူမျိုးရေးမူဝါဒများ
နာဇီဂျာမဏီ crossword - စစ်ရန်လမ်း
နာဇီဂျာမဏီ crossword - ထို Weimar သမ္မတနိုင်ငံ
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - Anti-နာဇီကိန်းဂဏန်းများ
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1918-23
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1924-32
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ဖြစ်ရပ်များ 1933-39
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - အုပ်စုများ
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - စိတ်ကူးများ
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - ခေါင်းဆောင်များ
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - အသုံးအနှုန်းများနှင့်သဘောတရားများကို (ငါ)
နာဇီဂျာမဏီမှတ်ဉာဏ်ပဟေဠိ - အသုံးအနှုန်းများနှင့်သဘောတရားများကို (II ကို)
နာဇီဂျာမဏီပဟေဠိ - စီးပွားရေးမူဝါဒများ
နာဇီဂျာမဏီပဟေဠိ - ဟစ်တလာ
နာဇီဂျာမဏီပဟေဠိ - ဘဝနှင့်အလုပ်
နာဇီဂျာမဏီပဟေဠိ - လူမျိုးရေးမူဝါဒများ
နာဇီဂျာမဏီပဟေဠိ - နာဇီပြည်နယ်
နာဇီဂျာမဏီပဟေဠိ - ထို NSDAP
နာဇီဂျာမဏီပဟေဠိ - စစ်ရန်လမ်း
နာဇီဂျာမဏီပဟေဠိ - ထို Weimar သမ္မတနိုင်ငံ
နာဇီဂျာမဏီ wordsearch - အယူအဆများ
နာဇီဂျာမဏီ wordsearch - လူတွေ
နာဇီဂျာမဏီ wordsearch - သောနေရာများ
၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် နာဇီဂျာမဏီ စိတ်ဝင်စားတယ်နှင့်လူသန်းပေါင်းများစွာအံ့သြလျက်ရှိသည်။ ဒါဟာ Weimar သမ္မတနိုင်ငံ၏အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်နှင့်မီးလောင်တိုက်သွင်း၏ကြောက်မက်ဖွယ်နှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ အကြား၌, နာဇီဝါဒထွန်းလူသန်းပေါင်းများစွာထိခိုက်ခြင်းနှင့်ခေတ်သစ်သမိုင်းရဲ့သင်တန်းပြောင်းလဲသွားတယ်။
အဆိုပါနာဇီ 1919 အတွက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းခဲ့သောသူကိုအစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီအုပ်စုတစ်ခုရှိကြ၏။ ကဦးဆောင် အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ, ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဟောင်းတစ်ဦးတပ်ကြပ်, နာဇီပါတီ 1920s အများစုများအတွက်အသေးစားနှင့် ineffectual နျြရစျ။
အဆိုပါစတင်ခြင်း ဂရိတ်စီးပွားပျက်ကပ် နှင့်ဂျာမနီအပေါ်စိတ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုဟစ်တလာနှင့်နာဇီပိုပြီးထောက်ခံမှုဆွဲကိုမြင်တော်မူ၏။ အဆိုပါနာဇီအပူတပြင်းဂျာမန်လူမျိုးအဘို့သစ်တစ်ခုနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာ option ကိုအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပေးအပ်သည်။ ဟစ်တလာနှင့်နာဇီတွေအကြောင်းနည်းနည်းအသစ်များကိုသို့သော်ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ obsessive အများစုဟာ - ပြည်နယ်ပါဝါ, အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှု, စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အမျိုးသားရေးဝါဒ, လူမှုရေး Darwin, လူမျိုးရေးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်, စစ်ရေးလက်နက်တပ်ဆင်နှင့်သိမျးပိုကျ - ခဲ့ကြသည် အတိတ်၏အတွေးအခေါ်များမဟုတ်ဘဲအနာဂတ်အတွက်.
1930 အသုံးပြုပုံနာဇီဂျာမန်အကြီးဆုံးပါတီဖြစ်လာခဲ့သည် Reichstag (ပါလီမန်) ။ ဤသည်မှာထောက်ခံမှုအတွက်လှူဒါန်းခဲ့ အဓိပတိအဖြစ်အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာ၏ချိန်းဆို ဇန်နဝါရီလ 1933 ၌တည်၏။
ဟစ်တလာနှင့်သူ၏နောက်လိုက်များအနိုင်နိုင်တစ်ဒါဇင်နှစ်ပေါင်းပါဝါကျင်းပပေမယ့်ဂျာမဏီအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုလေးနက်ခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းစုံတွဲတစ်တွဲအတွင်းမှာနာဇီဒီမိုကရေစီပယ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနှင့် တပါတီအာဏာရှင်ပြည်နယ် created.
ဂျာမန်သန်းပေါင်းများစွာ၏အသက်ကိုရှုံးများအတွက်ပိုကောင်း, များစွာသောအဘို့, အချို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ အမြိုးသမီးမြား အိမ်သို့ပြန်အမိန့်များနှင့်နိုင်ငံရေးနှင့်အလုပ်ခွင်ထဲကနေဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ ကလေးများ နာဇီဝါဒထွန်း၏အတွေးအခေါ်များနှင့်တန်ဖိုးများနှင့်အတူ indoctrinated ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းများနှင့်အလုပ်ခွင်နာဇီရည်ရွယ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ အားနည်းသို့မဟုတ်နှောင့်အယှက်လူမှုရေးသို့မဟုတ်လူမျိုးရေးအုပ်စုများ - ကနေ ယုဒလူတို့ အမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမမာ - ဖယ်ထုတ်လိုက်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါနာဇီကိုလည်းအားဖြင့်လောကဓာတ်ကိုကြိမ်းပ အဆိုပါ galloping စစ်ပြန်လည် ကြောင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအစောပိုင်းကပထမကမ္ဘာစစ်သို့ဂျာမဏီစီးပဲ့ကိုင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နှောင်းပိုင်း 1930s အတွက်, ဟစ်တလာ, လူ့သမိုင်းတွင်အသေအပျောက်အများဆုံးစစ်ပွဲဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မူဝါဒကဂျာမန်ပိုင်နက်တိုးချဲ့အကြောင်းကိုထားကြ၏။
alpha သမိုင်းရဲ့နာဇီဂျာမဏီက်ဘ်ဆိုက် 1933 နှင့် 1939 အကြားနာဇီနှင့်ဂျာမနီ၏မြင့်တက်လေ့လာနေများအတွက်ပြည့်စုံကျောင်းစာအုပ်အရည်အသွေးအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသေးစိတျအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောမူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းသတင်းရင်းမြစ်ရာပေါင်းများစွာပါရှိသည် ခေါင်းစဉ်အကျဉ်းချုပ် နှင့် စာရွက်စာတမ်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းကဲ့သို့သောရည်ညွှန်းပစ္စည်းပါရှိသည် ဘာလဲဆိုတော့အချိန်, စာလုံးအဓိပ်ပါယျတစ်ဦး '' သူသူကို 'နှင့်သတင်းအချက်အလက်များ သမိုင်း။ ကျောင်းသားများလည်းအပါအဝင်, အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတစ်အကွာအဝေးနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသိပညာနှင့်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းစမ်းသပ်နိုင်သည် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ, crosswords နှင့် wordsearches။ မူလတန်းသတင်းရင်းမြစ်ဘေးဖယ်, အာလဖသမိုင်းမှာအားလုံးအကြောင်းအရာအရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိဆရာ, ဆရာမများ, စာရေးဆရာများနှင့်သမိုင်းပညာရှင်များကရေးသားထားသည်။